युएईमा भाईरल भईरहेको ‘अफिस काण्ड’ के हो? यस्तो छ सम्पूर्ण वास्तविकता – hamrosandesh.com
युएईमा भाईरल भईरहेको ‘अफिस काण्ड’ के हो? यस्तो छ सम्पूर्ण वास्तविकता
बेलाबेलामा विभिन्न काण्डहरुले जुरुक्कै उचालिने नेपाली सामाजिक संजाल फेरी अर्को नामको काण्डले उचालिदै छ! यस अघि अष्ट्रेलिया काण्ड, जापान काण्ड, दैलेख काण्ड लगायत विभिन्न काण्डले मार्केट ता’त्तिएको थियो ! यतिबेला भने त्यस्तै अर्को काण्ड मार्केटमा देखिएको छ! नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले विशेष:त युवायुवती बिचको रोमा’न्सको लिक भएको भिडियोला’ई का’ण्ड नाम दिने गरेका छन् !
प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले लिक भएको काण्ड युएईको हो! अफिसमा क्लिनर काम गर्ने एक जना महिला र अर्का एक पुरुष ( सम्भवत: पाकिस्तानी) को भिडियो युएई का’ण्डको रुपमा भाईरल भईरहेको छ! ति महिला भने कुन राष्ट्रकि हुन खुलेको छैन! हुन त हुनको बोलीको लवज अनुसार उनि नेपाली हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ! एक सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताका अनुसार यो भिडियो केहि महिना पहिले नै लि’क भएको र पुरुष बंगाली नागरिक भएको जनाईएको छ!
त्यो भिडियो कसरी भाईरल भयो भन्ने कुरा खुलेको छैन! तर उक्त भिडियो अहीले युएई बस्ने नेपाली बीच म्यासेन्जर, वाट्सएप लगायत माध्यमबाट आदानप्रदान भईरहेको छ! बिस्तारै यो भिडियो देशविदेशका नेपालीहरु बीच भाईरल हुने क्रममा छ! यस्ता गोप्य सामाग्रीहरु क्यामेरामा रेकर्ड गर्नु नै गलत काम हो! अझ यसलाई लिक गर्नु त अपराध नै हो !
सरोज कुमार बजगाई यस्तो लेख्नुहुन्छ: हो गलत काम गर्ने त यहा हजारौं छन लोग्ने मान्छे या केटी मान्छे आफ्नो जिन्दगी स्वतन्त्र जिउन पाउनु तपाईं हामी सबैको अधिकार होला तर भनिन्छ नि आफ्नो अधिकार को प्रयोग गर्दा कर्तब्यको को पनि ख्या’ल गर्नु पर्छ भनेर ।हामी कुन उद्देस्य लिएर यहां आयका छौ ? हाम्रो कर्तब्य के हो ? परिवार फेमिली प्रती हामी कति बफादार छौ ?? यो कुरालाइ क्षनिक मोज मस्तीमा रमाउदै बिर्सनु भएन नि ।कसैको नजर मा यो एस्ता कुरा सामान्य होला तर कहि कतै यो कुरा लाई जाएज मान्न सकिन्न आफ्नो मोज मस्ती आफैमा सिमित हुनु पर्छ खुल्लम खुल्ला हुनु 100% गलत हो ।
नयाँ कानुन अनुसार अब अबिबाहित जोडीले सहमतीमा वे’श्यावृत्ततिको अर्थ नलाग्ने गरि सहबास गर्न पाउने छन्! हुन त यस अघिपनि युएईका विभिन्न शहरहरुमा यस्ता क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए! सहमतीको आधारमा हुने स’हबासलाई अब युएईमा अपराधको रुपमा हेरिने छैन ! यद्धपि नाबालिग वा मा’नसिक रूपमा अपांग व्यक्तिलाई जबरजस्ती यौनसम्बन्ध गरेमा दो’षी ठ’हरिने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड सुनाईनेछ। साथै १४ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरु विच सहमतीमै सम्बन्ध भएपनि त्यसलाई कानून बमोजिम दण्ड दिइनेछ।